मोदीलाई पत्रः पशुपतिनाथका भक्तलाई किन नाकाबन्दी गर्नुभयो ?
मलाई थाहा छ, यो पत्र तपाईंसमक्ष पुर्‍याइनेछैन । तपाईंको परम्परागत कर्मचारीतन्त्रलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि यस्ता कुरा मात्र तपाईंको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ जुन तपाईंलाई मनपर्छ । जुन तपाईंलाई मन नपर्ने सम्भावना रहन्छ, तपाईंको ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई सेभेन रेस कोर्स पुग्नुअघि बाटोमै हत्या गरिदिन्छ । किनभने तपाईं यहि चाहानुहुन्छ । तपाईंलाई मैले लेखिरहेको यो पत्रको नियती यहि हुनेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मेरो कलम रोकिएको छैन । आज मैले तपाईंलाई पत्र लेख्नैपर्ने भएको छ । किनभने तपाईंका कारण नेपालका तीन करोड मानिसको जीवन मानविय संकटमा फसेको छ ।
एक दिन विहानै मैले यस्तो दुःखद समाचार सुन्नुपर्‍यो, पश्चिम नेपालकी एक होनहार महिलाले तपाईंका कारण जीवन गुमाउनुपर्‍यो । स्थानीय स्कूलमा पढाउने शिक्षिकालाई प्रसुती व्यथाले च्यापेपछि स्थानीय स्वास्थ्यचौकी लगिएको थियो । तर, समस्या जटिल थियो । स्वाथ्यकर्मीले उनलाई एम्बुलेन्समा काठमाडौं लैजान सिफरिस गरे । परिवारजन एम्बुलेन्सको खोजीमा चारैतिर भौतारिए । तर, एम्बुलेन्सहरु तेलविहीन अवस्थामा थिए । दिन वित्यो । एउटै एम्बुलेन्स भेटिएन । आखिरमा ती महिलाले त्यहि स्वास्थ्य चौकीमा प्राण त्यागिन् । नवजात शिसुले यस धर्तिमै टेक्न नपाई आमाकै गर्भमा आमासँगै विलाए ।
थाहा छ मोदी जी, ती महिलाले तपाईंका कारण जिवन गुमाइन् । तपाईंले पेट्रोलियम पदार्थमा नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने दम्भ देखाउँदा एक आमा र शिशुको अनाहकमा जीवन गुम्यो । के ती महिलासँग/परिवारसँग तपाईंको रिशइवी थियो ? उनीहरुले के गल्ती गरेका थिए, जसका कारण उनीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ? मलाई लाग्छ, तपाईंजस्तो महात्माबाट जानेर यस्तो भएको हुनै सक्दैन ।
काठमाडौंका अस्पतालहरुबाट रिपोर्ट आईरहेका छन्-अक्सिजनको अभावमा नवजात शिशुहरुको श्वासप्रस्वास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । सयौं विरामीहरुको नाकमा जोडिएको अक्सिजन पाईपहरु थुतिएका छन् । अप्रेशनहरु क्यान्सिल भएका छन् । डाक्टरले लेखेका औषधी किन्न नपाउँदा स्वस्थ भएर घर पुगिसक्नु पर्ने विरामीहरु बेडमा छटपटाइरहेका छन् । र, जानाजान मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । थाहा छ मोदी जी, यो सब तपाईंका कारण भएको छ । तपाईंले नेपालविरुद्ध लगाउनुभएको नाकावन्दीका कारण । कृपया सोचिदिनुस् त, यदि तपाईंको बच्चा अस्पतालको बेडमा यसैगरि छट्पटाईरहेको भए तपाईंको हृदय कस्तो हुने थियो ?
आज सयौं आमा बाबुहरु यहि हृदयविदारक अवस्था ब्योहोरेर बसिरहेका छन् । आफ्ना बच्चाको अनाहकको मृत्युको साक्षी बनेर । तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, यस्तो अवस्था ? मलाई लाग्दैन, हिन्दू धर्मको कट्टर हिमायती तपाईंजस्तो विश्वकै आदर्शवान महापुरुषले यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
गत बर्षको दशैं लगत्तै मेरो मित्र प्रमोदको बुबाले टेलिफोन गरेर भन्नुभएको थियो- छोरा, आगामी बर्षको दशैंमा प्रमोदसँगै यतै आउनुपर्छ है । मैले अहिलेदेखि नै निम्ता गरेको । मेरो चौरासी पूजा गर्ने हो पूर्णीमाको दिन । मैले हुन्छ बुबा भनेको थिए । एक बर्षअघिदेखि तयारी गर्नुभएको थियो, उहाँले । दसैं नजिकिदै गर्दा प्रमोदले चिन्ता जनाइरहृयो, नाकावन्दीले सताउला जस्तो छ । नभन्दै म त के काठमाडौंमा बस्ने प्रमोदको परिवार चौरासी पुगेका बुबाको हातको टीका लगाउन गाउँ जान सकेन ।
एक्लै भए त हुन्थ्यो, साना बच्चाहरुलाई बसको छतमा झुल्टिङ पार्दै लाने कुरा भएन । उसका दाजुभाई दिदी बहिनीहरुको हालत पनि उस्तै । कोही विराटनगर, कोही धरान । हाम्रा मधेसवादी राजनीतिक दलहरुलाई आवरणमा देखाएरै तपाईंले नाकावन्दी लगाउने जुक्ति निकाल्नु भयो । आखिरमा दसैं टीका मात्रै खल्लो भएन, चौरासी पूजामा रमाउनुपर्ने मेरो साथीको परिवारले आँसुधाराका साथ कर्मकाण्ड पुरा गर्‍यो । तै जेठो दाजु गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो । चौरासी पूजा सारौं, अर्को बर्षसम्म बुबाको हालत के हो के हो ? नसारौं छोराछोरी विनै बुबाले चौरासी पूजाको कर्म गर्नुपर्‍यो । पूजा सकेपछि बृद्ध बुबा साह्रै रुनुभयो रे । र, मोदीजी तपाईंलाई आर्शिवाद दिनुभएछ- नरेन्द्र मोदीको चौरासी पूजामा सबै छोराछोरी उनकै वरीपरी होउन् । हिन्दू धर्मको मार्गदर्शक तपाईंलाई के भन्नु पर्‍यो र । हिन्दू धर्ममा चौरासी पूजाको महत्व के छ भनेर ।
हिन्दूहरुको अर्को महान चाड तिहारको संघारमा छौं, हामी । जुन ‘दिवाली’ तपाईंको भारतमा पनि उत्तिकै तामझामका साथ मनाइन्छ । आजै विहान मैले हाम्रा दिदी बहिनीको मलिन मुहार फेरि पढें । दाजुभाइलाई भाईटीकाको निम्ता गरौं, घरमा ग्याँस छैन । परिकारको कुरै छाडौं, सामान्य खानाको प्रवन्ध मिलाउने अवस्थासम्म छैन । थाहा छ, मोदी जी, नेपालमा दिदीबहिनी, दाजुभाई सबै एकै ठाउँ भेला भएर भातृत्वभावलाई जुगौंदेखि निरन्तरता दिँदै आएको चाड हो तिहार । तपाईंका कारण दशैं त खल्लो भयो भयो, तिहार झनै नरमाइलो हुँदैछ ।
हिन्दूहरुको यति ठूला चाड तपाईंजस्तो हिन्दू भक्तका कारण नरमाइलोमा परिणत भइरहेका छन् भनेर म कसरी विश्वास गरु ?
मोदी जी, मलाई थाहा छ, हाम्रा नेताहरुले तपाईंको चित्त दुखाएका छन् । तपाईंले हाम्रा वरिष्ठ नेताहरु शुसील कोइराला, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, डा. बाबुराम भट्टराईलाई (केहीलाई दिल्ली बोलाएर र केहलाई दूत पठाएर) प्रष्ट शब्दमा भन्नु भएको थियो, नेपालको आगामी संविधानमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ लेखिनुपर्छ । हाम्रा नेताहरुले आज्ञाकारी बालकले जस्तै तपाईंका सामू ‘हुन्छ’ भनेर फर्किएका थिए होलान् ।
संविधान लेख्दै गर्दा उनीहरुले तपाईंसँग गरेका वाचा विर्सेका पनि होइनन् । त्यसैले त आन्तरिम संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ लेखेका उनीहरुले नयाँ संविधानमा हिन्दू धर्मप्रति राज्य उत्तरदायी रहनेछ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी घुमाउरो भाषामा त्यसलाई अथ्र्याउन खोजे । उनीहरु नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर लेख्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । किनभने तपाईंले उनीहरुलाई ‘निर्देशन’ दिन सम्भवत ढिलाई गर्नु भएको थियो । त्यसअघि नै उनीहरुले पश्चिमा देशहरुसँग नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउने वाचा गरिसकेका थिए । जसलाई तोड्न सक्ने ‘नैतिक साहस’ पनि उनीहरुमा थिएन । त्यसैले तपाईंको बचन पनि राख्ने र पश्चिमाहरुसँगको वाचा पनि नतोड्ने गरी संविधानमा लेख्न नसुहाउनेगरी लम्मेतान भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
तर, तपाईंलाई लाग्यो, मेरो निर्देशन नमान्ने ? अब यिनीहरुलाई देखाइदिन्छु । के गरेर देखाईदिने त ? तपाईंसँग नयाँ प्लान थिएन । उही पुरानो गान्धी परिवारले प्रयोगमा ल्याएको नाकाबन्दी बाहेक । तपाईंले त्यसकै साहारा लिनु भएको छ । जुन अहिले तपाईंको घाटीमा अडि्एको हड्डी सावित हुने खतरा देखिँदैछ । तपाईं यसो उत्तरतिर फर्किएर नेपालतर्फ हेर्नुस् त, तपाईंले लगाएको नाकाबन्दीले पश्चिमा देश अर्थात क्रिष्चियनहरुप्रति तुलनात्मक रुपमा सद्भाव राख्ने यी नेताहरुलाईभन्दा साँझ विहान सुर्य र चन्द्रमाको पूजा नगरी भान्सा नगर्ने तीन करोड हिन्दूहरुलाई चरम सास्ती पुगेको छ । तपाईंँलाई त थाहै छ नी, यो नाकावन्दी भोग्ने नेपालीहरु तीनै हुन् जसले तपाईंले जस्तै संविधानसभालाई आफ्ना लाखौं लाख सुझाव पठाएर नयाँ संधिवानमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल लेखिनुपर्छ भनेका थिए । तपाईंको ‘निर्देशन’ र नाकावन्दी भोग्ने नेपाली जनताको धारणामा के फरक थियो र ?
तर, आज तपाईंले यिनै जनताको विरुद्धमा नाकाबन्दी गरेर उनीहरुको जिवन कष्टसाध्य बनाइदिनुभएको छ । मोदीजी, यसो गर्दा भोलि हिन्दू धर्मप्रति यति धेरै विश्वास गर्ने संसारकै एक मात्र यस देशका जनतामा यस धर्मप्रति नै वितृष्णा पो फैलिने हो कि ? काशीजस्तो पुण्य भूमिबाट निर्वाचन जित्ने तपाईंजस्तो महात्माले यसतर्फ सोच्नु भएको छैन भनेर मैले कसरी भन्न सक्छु र ।
म निकै सामान्यभन्दा सामान्य नागरिक हुँ । त्यसैले म सत्य लेख्न सक्छु । तपाईंले बाहिर देखिनेगरि त रामनामी ओड्नु भएको छ । तर, तपाईंको मन कालो रहेछ । तपार्इं भारत राष्ट्रको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यदि तपाईं हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईंको आफ्नै देश ‘हिन्दूस्थान’लाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुस् न । किन नेपाल हिन्दू राष्ट्र नभएको रिसमा यहाँका करोडौं पशुपतिनाथका भक्तहरुलाई सास्ती दिनुहुन्छ ? सैद्धान्तिक रुपमा कुनै पनि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष रहनु राम्रो हो ।
सबै धार्मिक समुदायप्रति राज्यले समान ममता दिन सक्नुपर्छ । तर, धर्म निरपेक्षतालाई कमजोरी ठान्दै गरिव नेपालीहरुलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेको छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने तपाईंँको दबाव र धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तन गराउनेहरुको अभियान दुबै नेपालका लागि घातक छन् । यसमा हाम्रा नेताहरुको ‘लोभी मन’ त्योभन्दा बढि घातक सावित भएको छ ।
तपाईंलाई लागेको होला, भारतप्रति परनिर्भर नेपालीलाई सजिलै झुकाउन सकिन्छ । नाकाबन्दी लगाएपछि उनीहरु आफ्नै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनेछन् । जनताको व्यापक दबावमा रहेको नेपाल सरकारले तपाईंले दिएको खाली कागजमा सहि गरिदिनेछ । र, ‘नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता’ फेरि शुरु हुनेछ । जुन गण्डक सम्झौतामा भएको थियो । कोशी सम्झौतामा भएको थियो । शारदा बाँधमा भएको थियो । र, पछिल्लो पटक महाकाली सन्धीमा पनि भएको थियो । माफ गर्नुहोला, तपाईंले नेपाली जनताप्रति ‘अण्डरइस्टिमेट’ गर्नुभयो । उनीहरु तपाईंको पेट्रोलप्रतिभन्दा करोडौं गुणा बढि आफ्नो देशप्रति समर्पित छन् । उनीहरु भीमसेन थापाका सन्तती हुन् । बलभद्र कुँवर उनीहरुका हजुरबुवा हुन् । जसले पानीसम्म नपिई देशका लागि लडेका थिए ।
र,सार्वभौम नेपाल आफ्ना सन्ततीलाई बुझाएका थिए । हो मोदी जी, आज कैयौं नेपाली भोकै छन् । उनीहरुको चुलो बलेको छैन । तर, जब आफ्नो मातृभुमिप्रति खेलबाड भएको छ नी उनीहरु भोको सिंह जस्तै गर्जिदैछन् । तपाइर्ँको पूर्वयोजना विपरित सारा नेपालीले सरकारलाई भनिरहेका छन्- हामी भोकै बस्न तयार छौं तर, भारतसँग नझुक ।
मोदी जी, तपाईं गलत बाटोमा हुनुहुन्छ । तपाईं बाध्य हुनुहुन्न कि तपाईंकै कारखानाबाट नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनुपर्छ भनेर । तर, तपाईं बाध्य हुनुहुन्छ,, नेपाललाई समुद्रीमार्गसम्म पुग्ने बाटो दिन । के तपाईं आफैले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्न तयार हुनुहुन्न ? मलाई लाग्दैन तपाईंले भारतलाई यति असभ्य मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याइदिनुहुनेछ । तपाईंले आफ्नो देशको इज्यत जोगाउन जतिसक्यो छिटो आफ्नो गल्ती सच्याउनुको विकल्प छैन । भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्री मार्गसम्म सहज पहुँच राख्ने अधिकार छ । हो, नेपाल सरकार कमजोर छ ।
त्यसैले आजसम्म उ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको छैन । तर, भोलि नेपाली जनताले उसलाई घिच्याएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पठाउनेछन् । हामी नेपालीलाई आफ्नो सदियौंदेखिको छिमेकी मित्र राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको हेर्न मन छैन । त्यसो हुनुपूर्व नै तपाईंले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारलाई सम्मान गर्नुहुनेछ ।
मोजी जी, लेख्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । तर, एउटै चिठीमा सबै लेख्न संभव छैन । मलाई मेरो टेलिभिजन सेटमा फेरि नि नेपाली जनताले तपाईंप्रति गरेको अघात स्नेहका दृष्यहरु हेर्न पाउने रहर छ, गत बर्षको नेपाल भ्रमणका बेलामा जस्तै । त्यतिबेला तपाईंले हाम्रो संविधानसभामा सम्वोधन गर्दै भन्नु भएको थियो नि, नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउनेछ…। फेरि त्यस्तै तर अन्तरहृदयदेखिकै तपाईंको आवाज सुन्ने रहर छ । समय गतिशील छ । ढिलो भयो भने न त तपाईंले चाहेर पनि यसो भन्न पाउनुहुनेछ । न त मेरो पुस्ताले तपाईंलाई सुन्न र सम्मान गर्न पाउनेछ ।